Sanduuqa Guriyeynta ee Weyn ee Minnesota: NOAH Fund I
Deeqdan cusub ee maalgelinta maaliyadeed ayaa ah qaab dhaqaale oo haya guriyaal jira, haynta oo la awoodi karo. Tani waxay muhiim u tahay sida kireystayaasha dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dakhligoodu hooseeyo ay ku adagtahay inay helaan guryo degan oo ku yaal Minneapolis-St. Aagga Booska Booska.
$ 5 milyan muddo 12 sano ah oo ah 2%; asalkiisu yahay 2017
Guryaha qiimaha badan ee la awoodi karo ayaa had iyo jeer loo baahan yahay, isla markaana heerarkeeda jaban ayaa soo saaraya qulqulka lacagta la isku halleyn karo. Maareeyayaal khibrad u leh maaraynta hantida oo leh aragti iyo maalgelin sax ah ayaa ka fogaan kara isku dayga ah inuu kor u qaado guryaha oo taa bedelkeed uu dib ugula noolaado dhismayaasha guryaha dadka shaqeeya. Maalgelinta Guriyeynta Minnesota ee Weyn NOAH Sanduuqa ayaa ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee bixiya maalgalinta noocan ah. Soo laabashada McKnight ee suuqa ka hooseysa ayaa u oggolaatay Sanduuqa NOAH inuu ku maalgeliyo raasamaal cusub bangiyada iyo hay'adaha dowladda oo aan horey ugu heli karin guryo la awoodi karo.
Soo Celinta Lacagta: Waqtiga hore si loo qiimeeyo
Saameynta Bulshada: Sanduuqa NOAH ayaa ilaalin doona 1,000 cutub oo guryo la awoodi karo ah oo ku yaal Magaalooyinka Twin Cities ilaa 2019.
Waxaa jira harraad ah heer qaran iyo heer degaan oo loogu talagalay xeeladaha dabiiciga ah ee macquulka ah. Freddie Mac wuxuu ahaa mid aad ugu riyaaqsanaa in si deg deg ah loo xirxiray iskaashiga NOAH Fund si uu u maal-galiyo raasamaalka deeq-lacageedka si heer sare ah. Istaraatiijiyadani ma ballanqaadeyso waxtarka awooda ee cutub kasta oo joogto ah, laakiin waxaan rajeyneynaa in ay soo saari doonto guryaha cusub ee guryaha iyo guryaha shirkadaha guryaha.